"14 yegumi yemakore mashanu Chirongwa" inotanga, Fuzhou inowedzera kuvaka kwe "guta" - China Foshan Hermes Simbi
"Gumi nematanhatu mashanu-emakore Chirongwa" anotanga, Fuzhou inowedzera kuvakwa kwe "guta"
Vhiki rapfuura, 21 mapurojekiti muLuoyuan Bay Port Area ye "Silk Road Seaport Guta" muFuzhou dzakasainwa, iine huwandu hwakazara hwe35.4 bhiriyoni yuan (RMB, yakafanana pazasi). Pakati pavo, iyo yepamusoro-kumagumo simbi yakakosha nyowani yezvinhu zvepasi purojekiti yakasimwa uye kuvakwa neChina Baowu Taiyuan Iron uye Simbi (Boka) Co, Ltd., iine huwandu hwekudyara hwemabhiriyoni gumi yuan, ichavaka matani emamirioni e3,22 ezvigadzirwa zveboutique mu Luoyuan Bay pahwaro hwechiyero chiripo cheBaosteel Desheng. Stainless simbi zvinhu.
Vakuru vemunharaunda vakaudza China News Agency vatori venhau musi wa8 kuti kontrakiti yepakati ichawedzera kukwidziridzwa kweLuoyuan Bay indasitiri yesimbi uye kusimudzira kusimudzira kwe "Silk Road Seaport Guta" kuvaka nyika yepasi rose yegirazi simbi isina tsvina boutique maindasitiri.
Iyo inokwira zvishoma nezvishoma "Silk Road Seaport Guta" muFuzhou idiki microcosm yekukurumidza kwaFuzhou kuvaka "guta". Mushure mekupinda mu "GDP inodarika dhirioni imwe yuan kirabhu" kekutanga, Fuzhou akaenderera mberi nekukura, achiedza nepese paanogona kutora iyo "kukura pole", kuvaka "Haisi" hub, uye kuedza kuva nyika yepakati guta.
Iyo "yegumi neshanu yemakore-mashanu Chirongwa" yakatanga. Fuzhou yakaburitsa pachena kuti mumakore mashanu anotevera, ichatarisa pakuvakwa kwe "maguta" matanhatu senge Fuzhou Binhai New Guta, Fuzhou University Guta, Southeast Auto Guta, Silk Road Seaport Guta, Fuzhou (Changle) International Aviation Guta. , uye Yemazuva Ano Logistics Guta. Yakaridza "kushevedza gungano" kuti ikurumidze kuvaka kweguta remazuva ano repasi rese.
Zvinoenderana nechirongwa ichi, "zvinangwa zvakaoma" zvekusimudzira kwaFuzhou panguva ye "Gumi Namashanu Yemakore Emakore" chirongwa ndeichi: kuwana kuwedzera kutsva kwesimba remuzinda wedunhu, kuyedza kuchengetedza huwandu hwepakati pagore hwekukura kwe7% muGDP, inzvimbo yakavakirwa ingangoita mazana mashanu emakiromita emakiromita, uye huwandu hwevanhu vanogara mumadhorobha hwevanhu zviuru mazana mashanu, hukuru hwedhorobha guru uye simba rekufambisa remwaranzi rakawedzera zvakanyanya.
Huang Maoxing, wedhipatimendi weChikoro cheEconomics cheFujian Normal University, anotenda kuti kuvakwa kwemaguta matanhatu emazuva ano kuchapa kukurudzira kwakasimba kwekukura kwepakati nepakati-kukuru kweFuzhou.
Pakutanga kwegore idzva, kuvakwa kwemaguta matanhatu emazuva ano muFuzhou kwakadzingwa zvizere. MuSoutheast Auto Guta iri muMinhou County, Fuzhou City, iyo 203 Provincial Highway Kuwedzera uye Kuvakazve Project, iyo Lanpu Industrial Park Project, uye iyo Dongtai High-kumagumo New Material Industrial Park chirongwa chiri kukurumidza. Ye Renyou, munyori weMinhou County Party Committee, akataura kuti kuunganidza boka remapurojekiti makuru uye akanaka anotsigira auto anozadzisa cheni yakasimba yekuwedzera indasitiri yemotokari, kuwedzera kuwedzera nekusimbisa indasitiri yemotokari, uye kuita zvese zvavanogona kuvaka kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweguta rine kusimudzira kusimudzira kwevanhu, maindasitiri uye guta.
MuBinhai Guta Nyowani reFuzhou, chirongwa cheFujian Berry Hekang Dhijitari Hupenyu Industrial Park (Phase II) chakatanga munguva pfupi yadarika, iine huwandu hwekudyara kwe1,678 bhiriyoni yuan, ichitarisa pagore komputa, kuenzanisira kwemajini, kugadzirisa geni, huchenjeri hwekugadzira uye humwe hunyanzvi hwehunyanzvi hwehunyanzvi. kuvaka nzvimbo yedata uye yekugadzira Base, R&D nzvimbo, uye mamwe akawanda-anoshanda, akazara-hupenyu-kutenderera hutano uye ekurapa maindasitiri mapaki. Iyi ndeimwe yekutanga batch yemapurojekiti makuru muFujian Province kutanga kuvaka kwakanyanya pakutanga kwe "14th Makore mashanu Emakore Chirongwa" nguva.
Kurudzira kuvakwa kwe "guta", uye Fuzhou ichawedzera rutsigiro rwemaindasitiri. Muhurukuro, Fuzhou Mayor Iwe Mengjun akataura kuti indasitiri ndiyo rutsigiro rwakakosha kusimudzira kusimudzira kwemhando yepamusoro munzira yekutenderera, uye hunyanzvi ndiyo yekutanga simba rekutyaira.
Tichitarisa kumashure ku "Gumi neshanu-Gumi-reMakore Chirongwa", nekuda kwekuenderera mberi kwekukura kwemashanu makuru mabhiriyoni zana masumbu emabhizimusi senge machira, makemikari faibha uye mwenje indasitiri chikafu, iyo yakazara maindasitiri anoburitsa kukosha kweFuzhou inotarisirwa kudarika 1.1 trillion yuan . Towards the "14th Five-Year Plan", Fuzhou acharamba akabata "niubi" yeindasitiri uye kwete kuzorora, kubatsira kukwezva vatungamiriri vakuru, kurima masumbu makuru, uye kugadzira maindasitiri makuru.
Zvakanakira mhiri kwemakungwa maChinese neTaiwanese zvakare rubatsiro rwakakura kuFuzhou kukurumidza kuvakwa kwe "guta". Fuzhou idhorobha rinozivikanwa rekuChina mhiri kwemakungwa uye yakakosha imba yemadzitateguru evaTaiwan. Kune vanopfuura mamirioni mana vanhu vekunze kwenyika mune zana nemakumi manomwe nenomwe nyika nematunhu epasi. Huang Maoxing anotenda kuti zvakawandisa kuunganidza huchenjeri uye simba revamwe vanhu kumba nekune dzimwe nyika kuyedza kuwedzera mari, matarenda uye tekinoroji kumba nekune dzimwe nyika kuungana muFuzhou kuchakurudzira kuvakwa kwemaguta matanhatu emazuva ano anosanganisira Fuzhou Binhai New City, Southeast Auto City , uye Silk Road Seaport Guta. Kurudzira iyo "mbiri kutenderera" uye shandira iyo nyowani yekuvandudza pateni. (Pedza)